Robert Weiss LCSW & Stefanie Carnes၊ PhD - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည် "ED အပေါ်သုတေသနအသစ်နှင့်အချိန်နှင့်အမျှအသုံးပြုမှု၏အချိန်များအားလုံးသည်အပြည့်အ ၀ မပါဝင်နိုင်"
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို ရုံပိုင်ခွင့်နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus အားဖြင့် coauthored စက္ကူထုတ်ဝေထားပါတယ် "မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူကြည့်ရှုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု Associated ။ "[ကျွန်မ] ဒီအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ unexplained erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စောဒက porn အသုံးပြုသူများသည် (ED), နှင့်, လေ့လာမှုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရှိနေသော်လည်းအဘယ်သူမျှမ penile တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်စိုက်ထူဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။[ii] ယင်းအစားအဆိုပါစာရေးဆရာအပတ်စဉ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ function ကိုအဖြစ် ED စုံစမ်းစစ်ဆေး, ပြီးတော့သူတို့ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ function ကိုအဖြစ် ED နှင့် ပတ်သက်. တောင်းဆိုမှုများလုပ်သူတွေကိုဒေတာ "reanalyzed" အဘယ်သူအားမျှသောအလေးအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, ကနေဒေတာတွေကိုဆွဲ။
အမှန်ကတော့, ဒီလှဲမှားသောအလုပျ၏စာရေးဆရာများသုံးအုပ်စုများသို့လေးယောက်ကသီးခြားလေ့လာမှုများကနေစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များ "binned": မှာအားလုံး porn အသုံးမပြုသူယောက်ျား, တစ်ပတ်ကို 01 နာရီ porn .2 သုံးပြီးခဲ့ကြသည်သူအမျိုးသားများနှင့်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးသူယောက်ျား 2.01 တစ်ပတ်ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီ။ ထိုအခါသူတို့ကအစောပိုင်းလေ့လာမှုများကိုသိမ်းယူပြီးခဲ့အမျိုးမျိုးသော (မတူညီသော) မေးခွန်းအဖြေများကိုရှိသူများ bins နှိုင်းယှဉ်။ တိုတိုမှာအခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များဘုံ protocol ကို အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေးမခံခဲ့ရပါ။ သုံးကွဲပြားခြားနားသောအမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (သုံးမိနစ်ဗီဒီယိုများ, နှစ်ဆယ်ဒုတိယဗွီဒီယိုများနှင့်နေဆဲဓာတ်ပုံများ) ကဲ့သို့တကယ်တော့သုံးမျိုးကွဲပြားခြားနားသော arousal တိုင်းတာခြင်းကြေးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုလူတို့ကသာသေးငယ်တဲ့လူနည်းစု (ဎ = 47) erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။ များစွာသောရှေ့နောက်မညီအားတစ်ဦးဆက်စပ်မမ (ဖြစ်ချင်တော့, သူတို့ရဲ့ erectile-function ကိုရမှတ်များကဤအနည်းငယ်ယောက်ျား, ပျမ်းမျှအသက် 23, တကယ်ပျော့ ED ရှိခဲ့။ ညွှန်ပြ) မရှိခြင်း ဆက်စပ်၏, Prause နှင့် Pfaus အားဖြင့်အခိုင်အမာအဖြစ်တစ်ဦးကအလွန်မှန်ကန်ပြဿနာအပေါ်အများကြီးအလင်းကိုသွန်းနိုင်ကြောင်း: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု porn အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
(လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲအပါအဝင်) အထူးသဖြင့်အကြီးစားညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများက - အမှန်တကယ်မှာတော့ porn အသုံးပြုသူများသည်အကြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှာရှာဖွေနေသုတေသနအတော်ကြာအများကြီးပိုကောင်းအပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်။ 350 Self-ဖော်ထုတ်လိင်စွဲများထဲမှမကြာသေးခင်ကဗြိတိန်စစ်တမ်းများတွင် 26.7% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။[iii] နောက်ထပ်လေ့လာမှု, 24 အထီးလိင်စွဲမှာရှာဖွေနေ, 1 အတွက်6(16.7%) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။[iv] သို့သျောလညျးကိုအခြားလေ့လာမှု, 19 အထီး porn စွဲမှာရှာဖွေနေဒီတစ်ခု, 11 (58%) သော်လည်းမ porn နှင့်အတူသူတို့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ arousal / စိုက်ထူနှင့်အတူဒုက္ခခဲ့အစီရင်ခံသော။ ကိုတွေ့[v] ဒါကနောက်ဆုံးနည်းနည်း, ED မကြာခဏအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမိတ်ဖက်နှင့်အတူသော်လည်းမ porn နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျနော်တို့ရသောအခါမြင်သောအရာကိုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် porn စွဲကုသ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ psychotherapeutic အလေ့အကျင့်၌တည်၏။ ဒါကအချက်တစ်ချက် Prause နှင့် Pfaus အားဖြင့်မှာအားလုံးအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်မဟုတ်။
ထို့ပြင် Prause နှင့် Pfaus စက္ကူသတင်းပို့ဘူး စိုက်ထူအဆင့်ဆင့် porn ကြည့်ရှုရန်တုန့်ပြန်ပါ။ အဲဒီအစားသူကအစီရင်ခံခဲ့သည် arousal ကြည့်ရှုအားပေး porn ရန်, ပုံအပြည့်အဝကြောင်း arousal ကိုနားလည်မပေးစိုက်ထူတုန့်ပြန်ကဲ့သို့တူညီသောအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ, 19 porn စွဲမှာရှာဖွေနေလေ့လာမှုမှာ, ဦးနှောက် Scan ဖတ်ကြောင်းပြသ porn-စွဲ ဘာသာရပ်များထက်ပိုခဲ့ arousal ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုထက် porn မှ (ဦးနှောက်ကို Activation) ။[vi] သို့သော်မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှင်းလင်းစွာအခြားကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, Prause နှင့် Pfaus အားဖြင့်လေ့လာမှု porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟုထေူဟုဆိုကာစာနယ်ဇင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အထောက်အကောင်းမြင်ဖြစ်ကြသည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဂျာမန်သုတေသီတွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီ porn-related ပြဿနာများ porn ကို အသုံးပြု. သုံးစွဲနာရီနှင့်အတူပတျသကျ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲပုံရိပ်တွေအရေအတွက်နှင့်အတူမ / ဗီဒီယိုတစ်ဦးကြည့်ရှု session တစ်ခုအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်။[VII] တစ်နည်း, အသစ်အဆန်းတစ်ခုလိုအပ်သစ်အမျိုးအစားများနှင့်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆွခုနှစ်တွင်ပုံအသုံးပြုမှုအပတ်စဉ်နာရီထက်ပိုပြောရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကပြည်နယ်၏စာရေးဆရာများ:
စိုက်ထူကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်အခြေအနေများမှလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲမ VSS [porn] ၏ရှုထောင့်မှအေးစက်ဖြစ်လာပေမည်။ လိင်စိတ်နိုးထအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများ, တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပင် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအပါအဝင်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ VSS ၏ဆက်စပ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထအများစုကြုံနေရ Partners လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနေစဉ်အတွင်းတစ်လျော့နည်းသွား erectile တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင် VSS ရှုမြင်သူကိုလူပျိုတို့လိင်သူတို့ VSS အတွက်ရှုမြင်သောအရာကိုဆင်တူ themes များနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ပူးပေါင်းကြောင်းမျှော်လင့်ထား။ ထို့ကြောင့်မြင့်သောဆွမျှော်လင့်ချက်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါ [တစ်ခုစိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်မပြုစေခြင်းငှါ] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွပူးပေါင်း။[VIII]
ကျနော်တို့သဘောတူသည်။ ဒါဟာသုတေသီများ porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ချင်လျှင်, သူတို့သည်အသုံးပြုမှုနာရီပေါ်ပေမယ့်အောက်ပါအချက်များပေါ်တွင်မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိင်:
ဒီစက္ကူကောလိပ်-အသက်ယောက်ျား၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားရာခိုင်နှုန်းတစ်ပတ်ကို porn ၏2နာရီထက်သုညသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလည်းကောင်းအသုံးပြုကြသည်အခိုင်အမာကြောင်းကိုလည်းသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနံပါတ်များကိုတည်ဆဲသုတေသနကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အခါသူ့စာအုပ်များအတွက်သုတေသနပို့ချ, porn တက္ကသိုလ်မိုက်ကယ် Leahy porn အသုံးပြုမှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာဖွေနေ, 100 ကောလိပ်ကျောင်းကျော်နမူနာ, သူသည်ကောလိပ်အထီးကသာ 51% တစ်ပတ်လျှင် porn ၏5နာရီထက်လျော့နည်းကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။[IX] ဤအတောအတွင်း Prause နှင့် Pfaus ၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များ (60 ၏ 81) ၏ 136% လျော့နည်းတစ်ပတ်ကို2နာရီထက် porn ကိုကြည့်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါဟာသိသိသာသာသွေဖည်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ဆန်းစစ်သောဒေတာများအတွက်စမ်းသပ်လူဦးရေ၏ယေဘုယျသံသယဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းတို့၏အကြွေးစေရန်, Prause နှင့် Pfaus ကဤဒေတာ hypersexual လူနာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး "အဲဒီရေးသားခြင်း, သူတို့ရဲ့အလုပ်န့်အသတ်ရှိကြောင်းဝန်ခံကြဘူး။ ရလဒ်များပုံမှန်နှင့်အတူယောက်ျားကန့်သတ်ထားအဖြစ်ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးအနက်များမှာပုံမှန် VSS [porn အသုံးပြုမှု] ကိုအသုံးပြုပါ။ "[X ကို] သို့သော်ဤမဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုထက် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိအဖြစ် porn အသုံးပြုမှု touting မှသူတို့ကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ သတိရပါသူတို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ခေါင်းစဉ်ကို "မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated ကိုကြည့်ရှုခြင်း။ " ကြောင်းသူတို့တွန်းအားပေးနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုမရင့်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်သည်မဟုတ်လော
porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စောဒကယောက်ျားအပေါ်အစိုင်အခဲသုတေသနအများကြီးလိုအပ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ထဲမှာယောက်ျားအပါအဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာယောက်ျား၏ကြီးထွားလာနံပါတ်များ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ် ED ခံစားနေရပြီးနေကြသည်။ နှင့်ဤကိစ္စကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင် (ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဘက်ကာလအတွက်ဆိုလိုသည်မှာလိုအပ်ကြောင်း) ၏ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်လုံးဝစေသောမပေးပါ။ sexy, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မိတ်ဖက်များနှင့်အတွေ့အကြုံများ၏အဆုံးမဲ့ပုံရိပ်တွေ - - အဖြစ်မှန်မှာတော့ပြဿနာသည်လူကို 70, 80, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း porn မှ masturbating သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏တောင် 90% သုံးစွဲရသောအခါဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ ပို. ပို. ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်တော်မူလျှင်, ကျော် ဒီထက်လိင်ကသူ့စိတ်ကိုတဆင့် parading သည့်ပုံရိပ်ယောင်ထက်ကိုနှိုးဆွတဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖွယ်အချိန်။
ဒီသုတေသနရောက်ရှိသည်အထိကျနော်တို့လောင်ဖို့ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချလူတွေကသတင်းမှားဖို့မဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အရက်နှင့်ဆေးလိပ်သတိပေးတံဆိပ်များရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းတစ်ဦးပွိုင့်ရှိ၏။ Clinician နှင့်သုတေသီများအဖြစ်ကျနော်တို့ဖွယ်ရှိတစ်ဦးထက်ပိုသတိပေး, ဒါမှမဟုတ်လူထုအနည်းဆုံးတစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်, မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြန့်ပွားသင့်ပါတယ်။
* ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S နှင့် Stefanie Carnes, Ph.D, CSAT-S ကဖြင့်
ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S ကနှင့်အတူလက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်ပါသည် ဒြပ်စင်အပြုအမူကနျြးမာရေး။ သူများအတွက်လက်တွေ့အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ထားပါတယ် အဆိုပါ Ranch Nashville, Tennessee ပြည်နယ်, အပြင်ဘက်တွင် Malibu အတွက်ကုသမှုစင်တာများကတိပေးထားနှင့် အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Recovery ကိုအင်စတီကျု Los Angeles မှာ။ သူဖြစ်ပါသည် စာရေးသူ မကြာသေးမီကထုတ်ဝေအပါအဝင်မြောက်မြားစွာစာအုပ်များ, ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွင်းလိင်စွဲ: အမြဲတမ်းဖွင် ဒေါက်တာဂျနီဖာ Schneider နှင့်အတူ coauthored ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်ကသူ့ website မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, www.robertweissmsw.com/.
Stefanie Carnes, Ph.D, CSAT-S ကယင်း၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည် စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စွဲလမ်းမှုပညာရှင်များ၏အင်တာနေရှင်နယ်အင်စတီကျု နိုဝင်ဘာလအတွက် 2010 ။ သူမသည်တစ်ဦးလိုင်စင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် AAMFT အတည်ပြုကြီးကြပ်ရေးမှူး။ သူမသည်အမျိုးသားညီလာခံမှာမှန်မှန်ပြော၏။ ကျွမ်းကျင်မှုသူမ၏ဧရိယာမမှန်ခြင်းနှင့်ဓာတုမှီခိုမစား, ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအဖြစ်မျိုးစုံစွဲလမ်းနှင့်အတူရုန်းကန်လူနာများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သူမသည်ဖြစ်ပါသည် စာရေးသူ အပါအဝင်အများအပြားစာအုပ်များ, ၏ တစ်ချိုးနှလုံးသားပွငျ: လိင်စွဲလမ်း၏အပေါင်းအဖေါ်များများအတွက်လမ်းညွှန်။
[ကျွန်မ] ချီးမွမ်း, N. , & Pfaus, ဂျေ (2015) ။ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုကြည့်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို.
[ii] "အဘယ်သူမျှမဇီဝကမ္မလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန် data တွေကိုယောက်ျားရဲ့ Self-အစီရင်ခံအတွေ့အကြုံကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ " (Prause နှင့် Pfaus,7၏စ။ 2015) ။
[iii] ခန်းမ, P. (2012) ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူရုန်းကန်သူတွေကိုနှင့်သူတို့ကိုကူညီချင်သောသူတို့အဘို့အဖြေပြည့်စုံလမ်းညွှန်: လိင်စွဲနားလည်မှုနှင့်ကုသ။ Routledge ။
[iv] Raymond, NC, Coleman, E. , & Miner, MH (2003) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 44(5), 370-380 ။